Iindidi zeNkampani yoQeqesho lwaselunxwemeni, izibonelelo, iindleko zokuNgeniswa
Ukuseka ii-Offshore Corporation, ii-LLC, ii-Trust, kunye ne-Akhawunti zeBhanki · Ukususela kwi-1906
Iimpendulo Zinyani ngabaqeqeshi abanolwazi
Buza imibuzo malunga nebhanki ye-offshore, ukwakheka kwenkampani, ukukhusela i-asethi kunye nezihloko ezihlobene.
Biza ngoku I-24 Hrs / Umhla
Ukuba ngaba ngabacebisi baxakeke, nceda ucelwa kwakhona.
Ezona ndawo ziphambili ziphakamileyo zeNkampani kuLawulo lwaselunxwemeni
Oku kulandelayo yinkampani yolawulo lwaselunxwemeni enikezela ngokudibanisa ukhuseleko lweasethi, ukhuseleko kwezomthetho kunye nemfihlo. Unokubona ifayile ye itshathi yokuthelekisa kwii-LLC zonxweme ngokucofa eli khonkco.
Nevis Ubungasese, ukuKhangela kunye nozinzo. Funda ukuba kutheni isiqithi saseNevis sesinye sezona ndawo zidumileyo zolawulo namhlanje. Ngaphezu koko, jonga esona sixhobo sinamandla kunxweme: i INevis LLC.
Belize -Iinkampani, i-IBC (Inkampani yeShishini yaMazwe ngaMazwe) kunye neBhanki. Ukongeza, uya kubona ukuba iBelize ibonelela ngeendlela ezahlukeneyo zokubandakanya kude nonxweme. Umzekelo, i I-LDC yaseBelizeI-Belize enye eya kwi-LLC ibonelela ngezibonelelo ezizodwa zokukhusela iiasethi.
Bhahamas -Simahla, ukuBucala kunye neMirhumo ephantsi. Ukongeza, unokufunda ngeendlela ezahlukeneyo onokukhetha kuzo kwiBahamas.
British Virgin Islands -Ukhuseleko oluphezulu, uKhuseleko lweeaseti kunye nokuBucala. Ngaphaya koko, unokuphanda ukuba iinkampani ezingaselunxwemeni kunye nee-IBC's kwi-BVI zikunceda kanjani ukukhusela ubutyebi bakho.
Cofa apha ukuze ufumane uluhlu olupheleleyo: iinkampani zonxweme.
KwiNkampani yeNkcazelo ye-Offshore
Iinkampani ezingaselunxwemeni zizinto ezinjengeenkampani okanye iinkampani ezinamatyala athile (ii-LLC) ifayilishwe ngaphandle kwelizwe ohlala kulo. Abantu ababandakanya iinkampani ezingaselunxwemeni benza njalo, phakathi kwezinye izinto, xa benomdla kukhuseleko lweeasethi, ukwanda kweshishini kunye nemfihlo yezemali. Ukongeza, ulwazi olungezantsi lushwankathela i- Izizathu zokuba kutheni abantu bezenza ezi zinto:
Ugcino lwerhafu (kuxhomekeke kumandla akho)
Imithetho eguqukayo yeShishini
Ukwahluka kwezeMali kwiHlabathi liphela
Amacandelo okuQulunqwa kweNkampani ye-Offshore
Apha, uya kubona uluhlu lwamanxweme amaninzi Iindlela zokukhusela iiasethi, iindleko kunye nezibonelelo. Ukongeza, eli candelo lixoxa ngemiba ebalulekileyo yocwangciso lwaselunxwemeni, kubandakanya iinkampani, ukubhenka kude nonxweme kunye netrasti, ukuba zenziwe njani kwaye kutheni. Okubaluleke ngakumbi, sinokuseka iakhawunti yebhanki yenkampani kwinkampani nganye oyimiselayo ngenkonzo yethu. Ngapha koko, unako ufunde ngaye ebhankini Apha.
Ekuqaleni, Imimandla emininzi yonxweme babe neenkqubo zomthetho eziluncedo ngokungaqhelekanga kwabo bafuna ukukhuselwa kweeasethi kunye nemfihlo yezemali. Khawuqwalasele oku izibonelelo zenkampani zonxweme kunye neenyaniso. Ngokukodwa, I-US ine-4.4% yabemi behlabathi, ukanti i-70% yamagqwetha ehlabathi kunye ne-96% yezomthetho zehlabathi. Ngaphezu koko, ngokungafaniyo namanye amazwe ehlabathini, asinaye umntu ongaphumelelanga ohlawula inkqubo yezomthetho. Ngokuchasene noko, kwamanye amazwe umntu osilelayo ematyaleni kufuneka ahlawule zombini iindleko zakhe zegqwetha kunye nabachasi bakhe. Ngenxa yoko, imithetho yabo yenza ukuba amatyala asuswe rhoqo.
Inkampani ye-Offshore = Moat kunye neeAlligators
E-US ukuba ubandakanyeka kwityala kwaye uphumelele, useneendleko zakho zomthetho, ke usalahleka. Kwelinye icala, Ukumangalela inkampani elunxwemeni kunzima kakhulu. Umzekelo, masithi umchasi wezomthetho ukhethe ukumangalela inkampani yakho engaselunxwemeni. Kungafuneka athumele ibhondi ukuze ityala lithunyelwe kwibhodi yokujonga kwakhona. Nabo, baya kugqiba ukuba ingaba ityala liyakwenza inkundla okanye hayi. Rhoqo, ibond ayibuyiswa. Ngenxa yoko, ababaninzi abantu abafaka isimangalo. Ke, olu luhlu oluqinileyo lokhuselo lwezomthetho. Ngamanye amagama, ngokusebenzisa nje igunya lommandla oselunxwemeni uyanciphisa ngokumangalisayo iimeko zomntu okumangalelayo.
kunye Nevis LLC, umzekelo, ukulungiswa kuka-2015 wenze umntu otyalwayo ukuba athumele i-bond eyi- $ 100,000 phambi kokuba bazise naliphi na inyathelo lokuqokelela isigwebo ngokuchasene nelungu lenkampani. Abenzi bomthetho beNevis baphucule imimiselo kwi2018 enika iinkundla zeNevis igunya lokuseta ibhondi nasiphi na isixa. Imali egcinwe ngokugcina iimali zakho kude namehlo angabonakaliyo, ke, ukuthintela ukumangalelwa, ukukhusela iiasethi zakho kwityala kunye nokwanda kwemfihlo yezemali zezinye zezizathu zokuya elunxwemeni. Olunye ulawulo olululo lwee-LLCs ziiViet Cook. Ngesiqhelo, ungalifunda eli nqaku kwifayile ye- INevis LLC vs. Cook Islands LLC ethelekisa ezi zinto zimbini.
Iindidi zeenkampani ezingaselunxwemeni
Enye ingongoma ephambili kukuba iinkampani zonxweme zibonelela nangasese ngaphezu kwequmrhu lasekhaya iintlobo. Imizekelo yoku ibandakanya amashishini, iinkampani ezinamatyala athile okanye iinkampani zeshishini zamanye amazwe (IBCs). Zininzi iindawo eziselunxwemeni ezinemithetho ethandekayo e-US, Canada okanye e-UK. Le mimandla ikhuphisana nabathengi bamanye amazwe. Ngenxa yoko, imithetho yabo ukuthanda ubumfihlo bobunini, imfihlo yamagosa kunye nabalawuli kunye nokungamkelwa kwabangaphandle zigwebo.
Njengoko kunokubonwa, amathuba okuba ityala elibetha umnini-shishini laseMelika liphezulu. Emva kwayo yonke loo nto, uninzi lwamagqwetha axabisa nje ukuze baphile. Ngapha koko, abanye abaze babone ingaphakathi lenkundla. Oko kukuthi, basebenzisa inkqubo yezomthetho ukunyanzela iinkokheli zeshishini kwiindawo zokuhlala ezingekho ngqiqweni. Unokufunda ngakumbi malunga nendlela inkampani elunxwemeni kubandakanywa inokukunceda kwiimfuno zakho zokhuselo ngokuthi ukubiza i-OffshoreCompany.com okanye by ukugcwalisa ifom kweli phepha. Siyakha amawaka ezakhiwo rhoqo ngonyaka, Ukunceda amawaka amaMelika ngokhuseleko kunye neemfuno zabucala kunye nokubonelela ngesikhokelo kuyo yonke inkampani yaselunxwemeni imigaqo.
Igqityelwe ukuvuselelwa ngoJuni 16, 2019
Ukuzinikezela kukuvuyisa amakhasimende ethu, ukuchithwa kweefayili ezichanekileyo, ukunikezela ngeenkonzo ngexesha elifanelekileyo kwizinto ezilawulwayo, kwaye sikhonza umxhesho obalaseleyo wabathengi bethu abathandayo.